After death | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » After death
Posted by မမလေး on Oct 12, 2010 in Education, How To.., Science & Religion | 24 comments
သေပြီးတဲ့ ... နောက်
သေပြီးတဲ့ … နောက်
သေရွာပြန်တာတို့ဘာတို့ ကျတော့ စာအုပ်ရှိတယ် အဖန် ၅၀၅ ကျတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်မရှိသေးဘူးနော် … သမီး ကြားဖူးတာက သေသွားလို့ရှိရင် လမ်းတစ်ဝက်မှာ မေးပြီးမှ နတ်ပြည်ဆို နတ်ပြည် ငရဲပြည်ဆိုငရဲပြည်ပို့တယ် ။။ နောက် ရုပ်ရှင်မှာကျတော့ သေသွားတာနဲ့ ငရဲပြည်ရောက်ပြီး ငရဲမင်းက ဆုံးဖြတ်ပြီး နတ်ပြည်သွားသင့်တဲ့သူက သွားပေါ့ အဲ့လိုမျိုး တန်းစီပြီး ဖြေရတယ် … တစ်ချို့ပြောတာတော့ ကောင်းတာလုပ်တာနဲ့ မကောင်းတာလုပ်တာကို ငရဲမင်းက မှတ်ထားပြီးသား သေသွားတာနဲ့ နတ်ပြည်တန်းရောက် ငရဲပြည်တန်းရောက်တာတဲ့ … ပြီးတော့ ကတို့ခပေးရတယ်ဆိုတာတစ်ကယ်လား … သရဲဆိုတာ ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ … စိတ်စွဲလမ်းရဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာရော တစ်ကယ်လား … သေသွားပြီးတစ်ပတ်ကြာရင် အိမ်ထဲဝင်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောသံကြားဖူးတယ် … ဘာလို့ တစ်ချို့အိမ်မှာ သရဲခြောက်တာလဲ … သရဲတွေက အမျှလိုချင်လို့ခြောက်တာတဲ့ … ဇာတ်ကားတွေမှာကျတော့ သရဲက လိုက်သတ်တာရှိရင် သရဲကိုက်ထည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ကပါသရဲဖြစ်သွားရောလေ … အဲ့ဒါမျိုးလား … တိတိကျကျ သိသူမရှိဘူးနဲ့တူတယ် … ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သမီးမှ မသိတာကိုး … သိတဲ့သူရှိရင်ပြောပြပေးနော် … သမီးရေးထားတာကို နားလည်မယ်လို့တော့ထင်တာကဲ ဟီးဟီး .. နည်းနည်းတော့ ရှုပ်တယ်နော် … ရေးထားတာကလေ
ညည်းကအလကားရတိုင်း မေးနေတာကိုး။ သရဲဆိုတာ တကယ်ရှိတယ်၊ မယုံရင် မှန်ထဲသွားကြည့်လိုက်။
ပို့ ကုန်တွေကို ကွာလတီလိုက်ပြီး ထုပ်ပိုးကြသလိုပေါ့သမီးရယ်
အဘဖြေလိုက်လို့ မယ်သီလဖြစ်သွားတာတွေက မနည်းဘူး
သေသေခြာခြာသိချင်ရင်တော့ ဓမ္မ ဆိုက်တွေမှာမေးတာအကောင်းဆုံးပါ
ှနျူကလီးယားတွေ စီးပွားရေးတွေ ကြီးပွားရေးတွေ သိခြင်ရင်တော့ ဖြေရသေးတာပ
http://www.burmeseclassic.com/dammaQA.php အဲ့သည်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုဘဲ
ဒါနဲ့ သမီးက ချစ်သူရည်းစားတွေဘာတွေကော ရှိပြီးလား အဟီးးးးးးး
ဘကြီးပု ပြသနာမရှာနဲ့နော်။ မန်းလေးဂေဇက်မှာ အားလုံးက တရားဓမ္မနဲ့ ပျော်မွေ့နေလိုသူတွေ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေ။ သမီးရည်းစားကိစ္စ အီစီကလီ တွေလာမလုပ်နဲ့။
ညီမငယ်လေး.. တရုတ်မလေး ဖြစ်တဲ့ အတွက် တရုတ် အယူဝါဒတွေ နားထဲမှာ ကြားဖူးနားဝတွေ များနေတာပါ. ကြည့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကလည်း တရုတ်ကား ပတ်ဝန်းကျင်က တရုတ်တွေ ဒီတော့.. ဒီအတွေးနဲ့ ဒီလိုဘဲ မေးမှာပေါ့.. ၇ရက် ပြီး အိမ်ထဲမ၀င်ရဘူးလားဆိုပြီးမေးတာကတော့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ တယောက်တလေ ဗမာ က ပြောလိုက်တာ ကို သိချင်လို့ မေးလိုက်တာဘဲ.. ဖြစ်ရမယ်။
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေမယ်ဆို တော်တော် အချိန်ကြာကြာ ဖြေရမယ်.. အချိန်ကြာတာထက်.. သာသာရေး အယူဆွဲသွင်းတယ်လို့ အပြောခံရမလားဘဲ.. ညီမက တရုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတော့ အမကလည်း တရားနည်းနဲ့ ဖြေပေးမယ်နော်..
သတ္တ၀ါတိုင်းဟာ သေခါနီး အချိန်ပိုင်းအနည်းငယ်မှာ အတိတ်ကပြုဘူးတဲ့ အရာတွေကို ပြန်မြင်တတ်တယ်.. အဲဒီလို မြင်မိတဲ့ အကြောင်းအကျိုးတွေက ကုသိုလ် အကုသိုလ် ပေါ်မူတည်ပြီး ဘ၀တွေ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
သတ္တ၀ါတွေက ဒီဘ၀ကနေ ဆုံးပါးသွားရင် နောက်ဘ၀ကို ချက်ချင်းရောက်သွားတာပါ.. ဥပမာ သရဲ (ပြိတ္တာ) ဆိုပါတော့.. သူတို့ ဘ၀ မကူးနိုင်လို့ စောင့်နေရတာ မဟုတ်ပါဘူး သူတို့ကလည်း သတ္တ၀ါတွေဘဲ.. ရုပ်နာမ်ရှိတဲ့ သတ္တ၀ါတွေပါဘဲ။
သေပြီး ၇ရက်အထိ အိမ်ထဲ ၀င်ထွက်နိုင်သလား ဆိုရင်တော့.. သေပြီး နတ်ပြည်တက်နေတဲ့သူ ဆိုရင် နတ်သက်နဲ့ ၁နှစ်ဆိုရင်တောင် လူပြည် နှစ်၁၀၀ လို့ ယေဘုယျ ဆိုကြပါတယ်.. နတ်ပြည်မှာလည်း သူအဆင့်နဲ့ သူ သက်တမ်းတွေ ရှိလို့နော်.. နတ်ပြည်ရောက်တဲ့ သူဆိုရင် ၇ရက်ဆိုတာ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်တောင် မကြာဘူး.. သူတို့ ရောက်ရောက်ချင်း သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ လူပြည် ၁နှစ် သူဆီက ၁ရက်လောက်တောင် ကြာသွားမလားဘဲ.. ၇ရက်ဆိုတာ.. အိမ်ကို ပြန်လာနိုင်ပါ့မလား.. အကယ်၍ သေတဲ့ သူက အကုသိုလ် အကျိုးပေးတွေ ရှိနေလို့.. သရဲ ဘ၀ရောက်နေတယ်ဆိုပါတော့.. သူကတော့ မိသားစု ပြုပေးတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို သူမျှော်နေမယ်ဆိုရင်တော့.. သူရဲ့ အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး အိမ်ထဲ ၀င်လာလို့ရတဲ့ သရဲ ရှိသလို အိမ်ထဲတောင် ၀င်လို့မရဘဲ.. ပြေးလွားနေရတဲ့ သရဲတွေလည်း ရှိတာဘဲ…
၇ရက်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကလည်း အမှန်တော့ သင်္ကန်းစွဲသွားတဲ့ သန်းကြီးမကို အကြောင်းပြုပြီး ၇ရက် ဆိုတဲ အယူဝါဒတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်..
ဆူးဖြေပေးတာ အများကြီး လိုအပ်ချက်တွေ ရှိပါတယ် တကယ်ဖြေမယ်ဆိုရင် အများကြိး ရှင်းလင်းချက်တွေ အကိုးအကားတွေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြေလို့ရနေလို့ပါ..
တရုတ်ရဲ့ အယူဝါတွေ မှာ သေချာ လိုက်ကြည့်ရင် သေရင် သရဲ ဖြစ်ကြတာဘဲ.. မိဘဘိုးဘွားတွေ သေရင် အစာကျွှေးရတာနဲ့.. မီးရှို့ပေးရတာနဲ့.. စုံနေတာဘဲ..
ညီမ သိချင်ရင် လေ့လာပါ.. ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင် အားထုတ်ပါ.. အားထုတ်တဲ့ အခါမှာတော့ လောကီ အကျိုးတွေ ထူးချင်ရင် သမထ အလုပ်ကိုလုပ်.. လောကုတ္တရာ အကျိုးတွေ ထူးချင်ရင်တော့ ၀ိပသနာ အကျင့်ကို ကျင့်ပါ.. ၀ိပသနာ အကျင့်ကို ကျင့်ရင်တော့.. ဘ၀ တိုတိုနဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သမထ အလုပ်ကို လုပ်ရင်တော့ ကျင့်ကြံ အားထုတ်တဲ့ သမာဓိ ရလေလေ.. စိတ်ထဲက လိုသိလို ဖန်တီးနိုင်တယ်.. ညွန်းပြီးတော့ မရေးတော့ဘူး.. စိတ်ကူးလွဲသွားမှာ စိုးလို့.. ၀ိပသနာ အကျင့်ကိုသာ ကျင့်ကြံ အားထုတ်တာ အကောင်းဆုံးဘဲလို့ ဆူး သိသလောက် လမ်းညွန်မယ်နော်..
နောက်ပြီး ကိုယ့်ဟာကို သတ်သေတဲ့ သူက ကြိမ်ရေ ၅ကမ္ဘာနှင့် ၅၀၀ လို့ ပြောတာပါ.. ၅၀၅ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒီတကမ္ဘာဆိုတာ ဘယ်အချိန်က စလဲ ဆိုတာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရှာဖွေနေတုန်းပါဘဲ.. အဲဒီလို ကမ္ဘာမျိုး ၅ ကမ္ဘာနဲ့ နောက်ထပ် အကြိမ်ရေ ၅၀၀ ကိုပြောတာပါ။
ညီမ ဆိုလိုတာ ဆူး သိတယ်.. အဘွားမယ်ခ သတ်သေတာ ဘာလို့ အဖန်၅၀၀ ၅ကမ္ဘာမဖြစ်သလဲ ဆိုတာ မေးဘူးတာ တွေ့မိတယ်.. သတ်သေတဲ့ သူတွေက တကြိမ်တခါ သတ်သေမိရင် အဲဒီ အကျိုးပေးကို နောက်ဘ၀တွေမှာ အကျိုးပေးတတ်တယ်။ သို့သော် အကျိုးပေးတချို့က နောက်တဘ၀ ဖြစ်တဲ့ အတွက်.. နောက်ဘ၀ တခုမှာ နီးစပ်ရာ ကုသိုလ် အကျိုးပေးတွေ ရှိနေရင် ထို အကုသိုလ် အကျိုးပေးတွေ မလာနိုင်ဘဲ ခေတ္တ ခဏ ငုတ်လျှိုးနေတတ်ပါတယ်.. တခါတရံ ဘ၀ပေါင်းများစွာ ကြာမှလည်း အကျိုးပေးတတ်တယ်။ အဲဒီလို အကျိုးများ ပေးနေရင်တော့ အောင့်ထားရကျိုးနပ်အောင် သူက ဆက်တိုက် အကျိုးပေးတတ်တယ်။ ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကျိုးပေး တချို့ လွတ်ကင်းသွားစေတာကတော့ အနိမ့်ဆုံး မဂ်ဥာဏ် သောတပန် အဆင့်လောက်ရောက်မှ တချို့တလေ အကျိုးပေးရပ်သွားတာပါ။ ဒီအကြောင်းတွေကတော့ ဆူးလည်း သေချာ မရှင်းပြတတ်ဘူး.. ဆူးကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာ နေဆဲမိုလို့ပါ.. ညီမ ကိုယ်တိုင် စာများများ ဖတ်ပြီး လေ့လာပါ။ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ပြီး စူးစမ်း ရှာဖွေပါ။
ဆူးရေးသော ကွန်မင့်ကောင်း၏ ..စေတနာထားပြီးရှင်ပြပေးတာလေးစားပါ၏ ။
အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ကိုဖတ်တီးရေ..
ခုမှပဲရေလည်သွားတော့တယ် နို့ မို့ ရင်သေပီးတာနဲ့
ဘာဖြစ်လဲဆိုယောင်ဝါးဝါးနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆူးဖြေထားတာ တော်တော်ကောင်းတယ်။ မမလဲ အသေးစိတ်မဟုတ်ပေမယ့် နဲနဲပြောပြမယ်နော် ဗဟုသုတပေါ့။ သတ္တ၀ါတွေက သံသရာထဲမှာလည်နေကြတာ။ ကောင်းရာသုဂတိ ၂၇ ဘုံ နဲ့ မကောင်းတယ့်ဘုံ ၄ ဘုံ စုစုပေါင်း ၃၁ ဘုံမှာကျင်လည်နေကြတာ။ နတ်ပြည်က ၆ ဘုံ၊ ဗြဟ္မာ့ဘုံ ၂၀ နဲ့ လူ့ဘုံ ၁ က ကောင်းတယ့်နေရာ။ ငရဲ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ဗြိတ္တာ၊ အသူရကယ် ဆိုတယ့် ၄ ဘုံက မကောင်းတယ့်ဘုံ။ သေပြီးရင်အများစုက အပါယ်ဘုံလို့တွေကို ရောက်ကြတာများတယ်။ တစ်ဘ၀ကသေတာနဲ့ နောက်တစ်ဘ၀ကို ချက်ချင်းကူးသွားတယ်။ လူပြန်ဖြစ်ရင်တော့ မိခင်ဝမ်းထဲရောက်သွားတယ်။ တချို့ဘ၀တွေက ပရိသန္ဓေနေရပြီး တချို့ဘုံတွေက တိုက်ရိုက်ဖြစ်ကြတယ်။ နတ်သမီး နတ်သား ငရဲသား သူရဲ။ အပါယ်ဘုံအကြောင်း အတိုချုပ်ပြောပြမယ်။ ငရဲပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာက အကုသိုလ်အများဆုံးသူတွေရောက်တယ့်နေရာ။ ငရဲဆိုတာ ဆင်းရဲခြင်းအကြီးဆုံးနေရာ၊ ဆီပူအိုးထဲမှာအထည့်ခံရတာ၊ သံချွန်တွေနဲ့အထိုးခံရတာ၊ တင်းပုတ်ကြီးနဲ့အထုခံနေရတာ စသဖြင့် ဆင်းရဲတရစပ်နဲ့လုံးဝချမ်းသာမရှိတယ့်နေရာ၊ တိရိစ္ဆာန်ဘ၀ကတော့ မြင်သာလို့ရှင်းပါတယ်၊ လူတွေနဲ့နီးစပ်တာကတော့ ဗြိတ္တာဘုံပဲ၊ အဲဒီဘုံကိုရောက်သွားရင် လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေကြတယ်၊ သူတို့က ခန္ဓာကိုယ်အကြီးကြီးနဲ့ ပါးစပ်ပေါက်သေးသေးလေးတွေနဲ့ စားလို့မရတယ့်သူတွေ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီသူတွေက သေခါနီးအစွဲအလန်းတစ်ခုခုကြောင့် ဗြိတ္တာဖြစ်နေတာဆိုရင် သူတို့ကို ကုသိုလ်လုပ်ပေးပြီးအမျှပေးဝေရင် အဲဒီဘ၀ကနေကျွတ်လွတ်ပြီး ကောင်းရာသုဂတိကိုရနိုင်ကြတယ်။ အဲဒီဘုံသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရက်လည်ဆွမ်းသွတ်အမျှဝေးပေးကြတာ။ အိမ်မှာ သူရဲခြောက်တယ်တို့ဘာတို့ဆိုရင်တော့ သေချာပြီ။ မကျွတ်ပဲ ဗြိတ္တာဘုံရောက်နေလို့ပဲ။ အသူရကယ်ဆိုတယ့်ဘုံက သူရဲဘုံ၊ သူတို့သူရဲပုံစံက မျက်လုံးပြူးပြီး အရပ်က ထန်းပင်လောက်ရှည်တယ်တယ့်။ သာမန်လူတွေ မမြင်နိုင်ဘူး။ လူတွေစွန့်ပစ်လိုက်တယ့် အညစ်အကြေး ချွဲသလိပ်တွေပဲစားပြီး နေကြရတယ်။ အပါယ် (၄) ဘုံက ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ပုထုဇဉ်ဆိုတယ့်လူတွေက အ၀ိဇ္ဇာဖုံးနေလို့ ကန်းပြီး အဲဒါတွေကိုမမြင်နိုင် မသိနိုင်ကြပဲ အကုသိုလ်တွေကို အမှတ်မဲ့နဲ့လုပ်နေကြတာ။ အဲဒီဘုံတွေကို မရောက်နိုင်တယ့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက မဂ်ဖိုလ်နိဗာန်ပဲ။ အနိမ့်ဆုံး သောတပတ္တိမဂ်ရအောင် အားထုတ်ထားနိုင်ရင်တော့ အပါယ်ဘုံကိုမရောက်နိုင်တာ သေချာသွားပြီ။ ညီမလေးလဲ စိတ်ဝင်စားရင် ၀ိပသနာတရားအားထုတ်ကြည့်ပါ။ အသိဥာဏ်တွေပွင့်လင်းလာပြီး ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်။
ဒီဘ၀သေပီးတော့နောင် ဘ၀ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ လက်တွေ့ သိချင်တာများဘာခက်လို့ …. အရင်ဆုံးကိုယ့်ကို ကိုယ် သက်သေလိုက်…ပီးရင် ရမမင်းနဲ့ တွေ့ မယ် အဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်မ ဘယ်သွား၇မလဲ ပေ့ါ.. ငရဲ၊ ပြိတ္တာ။ အသု၇ကယ် ဘ၀တွေ ရောက်မှာဆိုရင်တော့ ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတာသိချင်လို့ ဘာစုံစမ်းတာမို့ ဘုတ်တေးပေ့ါ… ကောင်းတဲ့ နေရာဆိုရင်တော့ လာလက်စနဲ့ ဆက်သွားမယ်ဆိုပီး ပြောပေ့ါနော်…
၅၊ ၀ိညာဉ်သည် ကာယနှင့် အတူတူပင်လော
၇။ တထာဂတသည် သေသည်၏အခြားမဲ့၌ တည်ရှိသလော၊
၈၊ သေသည်၏အခြားမဲ့၌ မတည်ရှိသလော၊
၉။ သေသည်၏အခြားမဲ့၌ (တစ်ပြိုင်နက်) တည်ရှိ-မတည်ရှိသလော၊
၁၀။ သေသည်၏အခြားမဲ့၌ (တစ်ပြိုင်နက်) မတည်ရှိ-မတည်ရှိမဟုတ်သလော၊
ဤပုစ္စာများကို မြတ်စွာဘုရားက ငါ့အား ရှင်းလင်းမပြပေ။ ဤအချက်ကို ငါမကျေနပ်၊ သဘောမခြိုက်၊ သွား၍မေးမြန်းမည်။ မြတ်စွာဘုရားက ရှင်းလင်းဟောပြလျှင် ရဟန်းဝတ်ဖြင့် ဆက်လက်၍၎င်းထံ၌ တရားကျင့် နေထိုင်မည်။ ရှင်းလင်းဟောပြခြင်း မပြုလုပ်လျှင် ရဟန်းဝတ်ကို စွန့်ပစ်၍ ထွက်ခွာသွားတော့မည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် စကြာဝဠာသည် အစဉ်အမြဲတည်ရှိသည်ကို သိပါက ၎င်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောပြပါစေ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် စကြာဝဠာသည် အစဉ်အမြဲမတည်ရှိကြောင်းသိလျှင်လည်း မရှိကြောင်း ပြောပါစေ၊ စကြ၀ဠာသည် အစဉ်တည်ရှိသည်၊ စကြာဝဠာသည် အစဉ်အမြဲ မတည်ရှိစသည်တို့ကို မသိပါက မသိသည့်အလျှောက် မကွယ်မထောက်ဘဲ “ငါမသိဘူး၊ ငါမမြင်ဘူး” ဟု မြတ်စွာဘုရားက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပြရန်သာ ရှိသည်။
မာလုကျပုတ္တမထေရ်သည် မိမိအကြံအတိုင်းပင် မြတ်စွာဘုရား သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူသည့် အချိန်ကိုစောင့်ကာ သွားရောက်၍ မေးလျှောက်လေတော့၏။ ဘုရားထံသွားကာ အကြပ်ကိုင်လေတော့၏။
ဘုရားထံမှောက် ရောက်သည့်အခါ မာလုကျပုတ္တမထေရ်သည် မိမိကြံစည်ထားသည့် အတွေးများ၏ အဖြေကို မေးလျှောက်လေတော့၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုအဖြေများကို ဟောကြားတော်မမူဘဲ ချန်ထားသည်ဟုထင်ကာ အပြစ်တင်သည့် သဘောများဖြင့် လူထွက်မည်ဟုပင် အကြပ်ကိုင်လေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်က
“မာလုကျပုတ္တ၊ ငါဘုရားက သင့်အား မာလုကျပုတ္တ၊ လာလော့၊ ငါ့ထံ၌ ရဟန်းဝတ်လှည့်လော့၊ ဒီပုစ္စာများကို ငါရှင်းလင်းဟောပြမည်” ဟု ပြောဖူးပါသလား၊
“သင်ကကော၊ အရှင်ဘုရား၊ အရှင်ဘုရားထံ၌ ရဟန်းဝတ်ပါမည်၊ ဤပုစ္စာများကို ရှင်းလင်းပြောပြပါ” ဟု တောင်းပန်ဖူး၊ လျှောက်ထားဖူးသလား။
မာလုကျပုတ္တ၊ အခုတောင်မှ ငါဘုရားက သင့်အား ငါ့ထံလာ၍ ရဟန်းပြုလော့၊ သင့်အား ဤအကြောင်းတရားများကို ရှင်းလင်းဟောပြမည်ဟု မပြော၊ သင်ကလည်း အရှင်ဘုရားထံ ရဟန်းဝတ်၍ နေထိုင်ပါမည်၊ ဤပုစ္စာများကို ဖြေရှင်းပြတော်မူပါဟု မလျှောက်ထား၊ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မည်သူက မည်သူကို ညှဉ်းဆဲသည်ဟု ခေါ်ဆိုရမည်နည်း အသင်လူမိုက်။
မာလုကျပုတ္တ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် မြတ်စွာဘုရားထံ၌ ဤပုစ္စာများကို မဖြေမချင်း ရဟန်းမ၀တ်ဟု ပြောငြားအံ့၊ ၎င်းသူသည် တထာဂတထံမှ ဤပုစ္စာတို့၏ အဖြေကိုမရရှိဘဲ အသက်သာလျှင် ဆုံးရှုံးကောင်း ဆုံးရှုံးသွားပေမည်။
မာလုကျပုတ္တ၊ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်ကို အဆိပ်လူးသောမြားထိအံ့၊ ၎င်း၏ မိတ်သင်္ဂဟ ဆွေမျိုးသားချင်းတို့က သမားတစ်ယောက်ထံ ဆောင်ကြဉ်းသွားအံ့၊ ထိုအခါတွင် လူနာက ကျွန်ုပ်အား မြားဖြင့်ပစ်သူကို မသိရသမျှ မြားကိုမဖြုတ်ရပြီ၊ မြားပစ်သမားသည် ခတ္တိယ (စစ်သည်တော်တန်းစား) မျိုးနွယ်လော၊ ဗြာဟ္မဏ (ရဟန်းပုဏ္ဏား) အမျိုးနွယ်ပင်လော၊ သို့မဟုတ် ဝေဿ (ကုန်သည်လယ်လုပ်) အတန်းအစားလော၊ သုဒ္ဓ (ဇာတ်နိမ့်) ထဲကပင်လော၊ သူ့အမည်၊ သူ၏ဆွေမျိုးအမည်က အဘယ်ဖြစ်သနည်း အရပ်မြင့်သလား၊ ပုသလား၊ အလယ်အလတ်ပဲလား၊ အသားအရေက မည်းသလား၊ ညိုသလား၊ ရွှေရောင်အဆင်းလား၊ ဘယ်ရွာ၊ ဘယ်မြို့၊ ဘယ်နိဂုံးကလားခဲ့သနည်း။
အဘယ်လေးမျိုးဖြင့် ပစ်ခွင်လိုက်သည်ကို မသိရသမျှ မြားကိုမဖြုတ်ရပြီ၊ မည်ကဲ့သို့လေးကြိုးကို အသုံးပြုလိုက်သနည်း။ မြားတံက မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်သနည်း။ မြားတံပေါ်တွင်မည်သည့် အမွေးဖွားများ တပ်ထားသနည်း။ မြားဦးကို မည်သည့်အရာဝထ္ထုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသနည်း၊ စသည်ဖြင့် မေမြန်းစုံစမ်းသည် ဆိုပါတော့၊ ထိုသူသည် ၎င်းသိလိုသော ဤအကြောင်းအရာများ တစ်ခုမျှမသိရှိနိုင်မီ အသက်သေဆုံးရပေမည်။
မာလုကျပုတ္တ၊ ဤနည်းတူစွာပင်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် စကြာဝဠာသည် အစဉ်အမြဲတည်သလော၊ မတည်သလော၊ အစရှိသော ပုစ္စာတို့ကို မဖြေမချင်း မြတ်စွာဘုရားထံ၌ ရဟန်းမ၀တ်ဟု ပြောငြားအံ့၊ ထိုသူသည် အသက်သေဆုံးသည့်တိုင်အောင် တထာဂတ ထံမှ ဤပုစ္စာများ၏ အဖြေတို့ကို ရရှိမည်မဟုတ်ပေ။
ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် မာလုကျပုတ္တအား ရဟန်းဝတ်၍ သူတော်ကောင်းတရားကျင့်နိုင်ရန် ဤအယူအဆသဘောတရားများအပေါ် မတည်ရှိကြောင်း ရှင်းလင်းဟောပြတော်မူလေသည်။ ဤပြဿနာရပ်များနှင့်ပက်သက်၍ မည်ကဲ့သို့ ထင်မြင်ယူဆစေကာမူ ဇာတိ၊ ဇရာ၊ ဗျာဓိ၊ မရဏ၊ သောက၊ ပရိဒေ၀၊ ဒုက္ခ၊ ဒေါမနဿ တို့ ရှိမြဲ ရှိနေမည်။ ဤဘ၀၌ပင် ၎င်းတို့ချုပ်ငြိမ်းရာ (နိဗ္ဗာန်) ကိစ္စကိုသာ ငါဘုရား ဟောကြားတော်မူပေသည် ဟု မိန့်မြွက်တော်မူလေသည်။
မာလုကျပုတ္တ၊ ဒါကြောင့် မည်သည့်အကြောင်းအရာများကို ငါဘုရားဟောကြားသနည်း၊ မည်သည့်အကြောင်းအရာများကို ငါဘုရား မဟောကြား၊ ရှင်းလင်းမပြသနည်း ဆိုသည်တို့ကို ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်းထားလော့၊
မည်သည့်အကြောင်းအရာများကို ငါဘုရား မဟောကြားသနည်း၊
စကြ၀ဠာသည် အစဉ်အမြဲတည်သလော၊ မတည်သလော၊ (အထက်ဖော်ပြပါ အယူအဆ ၁၀မျိုး) စသည်တို့ကို ငါဘုရားရှင်းလင်းဖော်ပြ ဟောကြားတော်မမူ။
ဒါဖြင့်လျှင် မာလုကျပုတ္တ၊ သင့်အား အဘယ်တရားများကို ငါဘုရား ဟောကြားပေသနည်း၊
သင့်အား ဒုက္ခအကြောင်းကို ရှင်းလင်းဟောကြားသည်။ ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်း (သမုဒယ) အကြောင်း၊ ဒုက္ခ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း (နိရောဓ)အကြောင်း၊ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာ ရောက်ရန်လမ်းစဉ် (ဒုက္ခ နိရောဓ ဂါမိနိပဋ္ဋိပဒါ) အကြောင်းကို ဟောကြားသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဤအကြောင်းအရာများကို ဟောကြားပေသနည်း။
မာလုကျပုတ္တ၊ ဤအကြောင်းအရာများသည် အသုံးဝင် အရာရောက်သည်။ သူတော်မြတ်တို့၏ လုပ်ငန်းကျင့်စဉ်နှင့် အခြေခံ ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ငြီးငွေ့ရွံရှာခြင်း ဖြစ်စေသည်။ တွယ်တာမှုကင်းစေသည်။ ချုပ်ငြိမ်းစေသည်။ ချမ်းမြေ့စေသည်။ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၊ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်း အလို့ငှာ ထောက်ပံ့ကူညီမှု ပြုသည်။ ဤအကြောင်းအရာများကို ငါဘုရား ရှင်းလင်းဟောပြခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ကို kai ဖော်ထုတ်တဲ့ ပုစ္ဆာ ၁၀ခု က အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဆူး အထွဋ်တက်တာ တော့မဟုတ်ဘူးနော်.. Gong Zhu မေးတဲ့ မေးခွန်းက မဖြေဘဲ နေတာ ပိုကောင်းမလားလို့ ရည်ရွယ်စေချင်တာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်.. အခြေခံကျတဲ့ မေးခွန်းကို အခြေခံ အကျဆုံးနဲ့ လူနားလည်အောင် ဖြေပေးထားတာပါ။ ဒါလေးတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အပေါ်ကGong Zhu မေးခွန်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရေးရှုထောင့်အရ အဖြေမရှိဘူးလို့ ဆိုလိုရင်းပါပဲ။
ကမ္ဘာစစ်ပြီးခေတ်လောက်တွေက ငရဲနဲ့ခြောက်၊ ဘုံနဲ့မြှောက်ဆိုတဲ့စကားခေတ်စားဘူးတယ်…။
ဒီလိုကိစ္စတွေက လူငယ်တွေအပေါ် နက်နက်နဲနဲဖြစ်လာတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး .. စာတခုရေးနေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာမို့ … ၀င်ေ၇းလိုက်တာပါ။ တခြားဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါဘူး..။
ဆရာရေ.. ဒီကိစ္စတော့ ဆူးနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲနေပြီ.. သေချင်းရဲ့ အခြား တဖက်က ဘာလဲဆိုတာ အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်း မဟုတ်ပါဘူး.. ၀ိပသနာကို သေချာရှုမှတ်ကြည့်ပါ အဲဒီ မေးခွန်းတင်မကဘူး.. သေရင် ဖြစ်တဲ့ စုတေ စိတ်ကိုပါ အတိအကျ ခံစားသိလာလိမ့်မယ်။ မယုံမရှိနဲ့ စာဖတ်ပြီးပြောတဲ့ စာတွေ့မဟုတ်ဘူး။ ဆူး ပြောတဲ့ စကားတွေထဲမှာ ခြိမ်းခြောက်တဲ့ စာ တခုမှတော့ မပါဘူးထင်ပါတယ်။ ငရဲဘုံ အသူရကယ်ဘုံ ဒုက္ခဆင်းရဲ အကြောင်း မပါပါဘူး.. နတ်ဘုံတွေမှာ အချိန်ကွာခြားလို့.. အိမ်မှာ ၇ရက် ၀င်ထွက်မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအခြေအနေကို ဖြေပေးလိုက်တာပါ။ ဆူး အခု ပြောတာ ရန်လိုတဲ့ စကားမဟုတ်ပါဘူးနော်.. ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေက နက်နဲသလို လိုချင်တဲ့ နေရာမှ လိုရာ သုံးနေတဲ့ အတွက်.. လိုရင်း မရောက်ဘဲ ဒီမှာ ဖတ်နေတဲ့ လူတွေ အယူမကွဲလွဲစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ပြန်ချေပတာပါ။ သေချင်းရဲ့ အခြားတဖက်မှာ ဘာရှိလဲ ရှာနေတာ လူငယ်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်မဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာဝင်တွေက လည်း ရှာဖွေကြတယ်။ တခြားဘာသာဝင်တွေကတော့ သူတို့ သေရင် ဘုရား အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူတယ်လို့ ပြောကြတယ်.. ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ဘာသာတွေ အကြောင်း ထည့်မပြောတာ အကောင်းဆုံးမို့ မပြောတော့ဘူး.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူငယ်တွေကလည်း ငါတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာမှာ သေခြင်းရဲ့ အခြားတဖက်မှာ ဘာရှိလဲ ငါတို့ သေရင်ကောလို့ မေးချင်ကြတာ.. လူတိုင်းသေကြမှာဘဲ သတ္တ၀ါတိုင်း မသေဘူးတဲ့ သူမရှိပေမဲ့ အရှေ့ဘ၀ သေတုံးက ဘယ်လို စိတ်ဖြစ်ပြီး သေလို့ ငါလူဖြစ်လာသလဲလို့ လူတိုင်းမသိဘူး.. တရားအားထုတ်မှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့ လူတွေမှသာ သိမြင်ကြတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်.. ဒီမေးခွန်းကို တလေးတစားဖြေပေးတာပါ။ လမ်းကြောင်းလွဲသလို ဖြစ်မှာ မလိုလားချင်းအတွက် အတိုက်အခံ ငြင်းမိသလို ဖြစ်ရင်တော့ ခွင့်လွတ်ပေးစေချင်တယ်။ သဘော ထားမတူညီတာ ရှိရင် ထပ်ပြီး ဆွေးနွေးပါ ဆူး စောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်..
ဆရာရေ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ပြုပါ။ ပွိုင့်လည်းမဖြတ်ပါနဲ့။ ဘုရားက သူချွတ်ရမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေရဲ့ ပါရမီကိုလိုက်လို့ တရားဟောခဲ့ပါတယ်။ ဦးတည်ချက်က တခုထဲပေမဲ့ ညဏ်ကြီးသူကို ညဏ်တရား ကံကြီးသူကို ကံတရားပါ။ ကိုKAIပေးခဲ့တဲ့ ဘုရားဟောဥပမာဟာလည်း အဟောခံရသူနဲ့တန်တဲ့ စကားလုံးကို ပေးခဲ့တာပါ။ ဒါတခုထဲကိုကွက်ပြီးတော့ ရှေးနောက်ဘဝ မရှိဘူးလို့ ကောက်ချက်ချလို့ မရလို့ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးဘုရားက ကျွတ်နိုင်ဖို့သေချာ သလောက်ရှိသူကိုသာ ချွတ်ပါတယ်။ ချွတ်ရင်လည်း အစောကပြောခဲ့သလို သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တန်သလောက်သာ ဆုံးမပါတယ်။ မာလုကျပုတ္တသည် ရှေးကံအရ သူများတွေလို ငရဲနတ်ပြည် ရှေးနောက်ဘဝတွေနဲ့ ပြောလို့မရရင် သူ့နဲ့ကိုက်မဲ့ စကားကိုသာရွေးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သူ့ကို ဘုရားဟောခဲ့တာမှာလည်း ပညတ်အရာတွေကို ရှောင်ပြီး ပရမတ်နောက်ကိုသာ တန်းလိုက်ဖို့ ပြောတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘဲ အချိန်ကုန် လူပန်းမဖြစ်စေလိုလို့ရယ်၊ သူမေးတဲ့ ပညတ်အကြောင်းအရာတွေဟာ မာလုကျပုတ္တ အကျွတ်တရားရသွားခဲ့ရင် သူ့ဘာသာသူ ဆင်ခြင်နိုင်မဲ့ တရားတွေမိုလို့ တရားမတွေ့ခင် မပြောဘဲ ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင် ပြောခဲ့တာလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
gong zhu ရဲ့မေးခွန်းက အမေး နွားကျောင်းသား အဖြေ ဘုရားလောင်းဆိုတယ့် စကားပုံလေးလိုဖြစ်နေတာပါ။ အဲဒီအဖြေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေဖို့ မြတ်စွာဘုရားက လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးမှ လူသားတွေကို ပြန်လည်ဟောပြောနိုင်ခဲ့တာပါ။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေပေးဖို့ မလွယ်ပေမယ့် အဖြေကတော့ ရှိပါတယ်။
ဖြေသင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မဖြေသင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးက သမီးထက်သိလို့ စေတနာ နဲ့ လက်ညောင်းခံ အချိန်ပေးပြီး ပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … အဲဒီ သေပြီး ၇ ရက်က တရုတ်အယူဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး မြန်မာလူမျိုး ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာ ဆရာမ ပြောပြတာကြားဖူးတာ … သမီးက တရုတ်ပေမယ့် တရုတ် အယူဝါဒတွေကို မသိပါဘူး … ဟီးဟီး
သေပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆိုတာ သိချင်ယင် ဦးအေးမောင်ရေးတဲ့ (သေပြီးဘဝနှင့်သုတေသနများ)ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရှာဖတ်ကြည့်စေချင်တယ် ..ဘာသာပြန်ဆိုပေမဲ့မြန်မာတွေယုံကြည်နေတာနဲ့အတော်နီးစပ်တယ်။။
ဒီပိုစ်က ဟိုးအရင်က ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတဲ့ ပိုစ်ကြီး.. အရှေ့ရောက်လာပါကောလား။
လှည်းတန်း က ဗုံးက ဒီပို့စ်ထဲ ရောက်လာတာကိုးးး
ဒီပို့စ်က အမှတ်တရပဲ … မနှစ်က အောက်တိုဘာမှာ ပထမဆုံး ကွန်မန့်ပေးပြီး ဂေဇက်ထဲကို ၀င်လာမိတဲ့ ပို့စ်ဖြစ်လို့ပါပဲ …
သေချာတာ အဲ့တုန်းကတော့ ဥကြောင်နဲ့ ဖွားဆူး သဂျီးကို ကောင်း၂မွန်၂ မန့် ကြသေးတာဘဲ…
သည်၁နှစ်နှင့်၂လအတွင်း … သဂျီးဘာတွေ မထော်မနန်းလုပ်လို့ …ပါးပါး လှီးမယ်တွေ …မီးဒုတ်တွေ
ကောက်ရိုးအုံပြီး မီးရှို့မယ် ဖြစ်ကုန်ပြီ.. ဟိဟိ.. ဇိမ်ဘုန်းကြီးကို မီးပူဇော်မလို့ပါ။
အစကတော့ သူကြီးကို အနုနည်းနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပြောကြတာပေါ့ … ကြာလာတော့ ဘယ်စိတ်ရှည်နိုင်တော့မလဲလေ … ငြင်းကြရင်း ဘယ်လိုမှ ပြောမနိုင်တော့တာနဲ့ လေသံတွေပြောင်းကုန်တာ …
ပြောရတာမောလို့ အမကတော့ ဘာမှ ၀င်မပြောတော့ဘူး … ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေလိုက်တော့တယ် …